Wararka Maanta: Arbaco, Aug 11, 2021-Meydadka 7 ruux oo la sheegay iney dileen Ciidamada AMISOM oo yaala Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho
Meydadka dadkan rayidka ah ayaa laga keenay deegaanka lagu magacaabo Golweyn oo kuyaala duleedka degmada Marka ee gobolka Sh/hoose, waxaana la sheegay in dadkan la dilay isugu jiraan Beeraleey iyo Baabuureey iyo waliba dad guryahooda lagala soo baxay.
Mid ka mid ah ehelada meydadka yaala Isbitaal Madiina ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada AMISOM ay si bareer ah u dileen dadkan shacabka ahaa.
"Dadka qaar waxay kasoo dhex qabteen beerahoda qaarna waxay kaso baxsaden guryahooda qarna waxay ahayeen baabuurey, dhamantood xabado ayay madaxa kaga dhufteen kadib ayay meel intey isugu geeyeen miino ku qarxiyeen si loo dhaho dadkan miino ayaa la qaraxday" ayuu yiri mid ka mid ah ehelada dadka la dilay.
Meydadka 7 qof ee yaala Isbitaalka Madiina hilbahooda ayaa waxa ay ku jiraan Jawaano oo miinada ayaa kala jarjartay dadka waxaana ehelada ay sheegeen ineysan aasi doonin dadkan ilaa dowladda Soomaaliya wax ka qabato dhacdadaan.
"Walaalkey hilbahiisa waxaan kasoo helnay laba lugood kaliya waxuuna ahaa baabuureey rasaas ayay la dhaceen kadibna intey dadkii kale isku wada xireen ayay miino ku qarxiyeen, mana aaseyno ilaa dowladda dhibaatadeena ka hadasho" ayuu yiri mid ka mid ah ehelada dadka dhintay.
Dadkan la sheegay iney dileen ciidamada AMISOM waxaa ku jiray Aabe Soomaaliyeed oo 65 sano jir ahaa oo la sheegay iney kaso dhex qabteen Beertiisa isaga iyo qaar ka mid ah shaqaalahiisa kadibna rasaas madaxa kala dhaceen.
Sh/hoose inta badan waxaa ka dhaca dagaalo culus iyo duqeymo xoogan oo saameyn adag ku yeesha noloasha dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolkaasi.